Imperium Romanum: तपाइँको हात मा रोम - उच्च गहना सपना
प्रत्येक ग्राफ भोन फाबर-कास्टेलको पेन अफ इयरले युग, पात्रहरू, र व्यक्तिहरू जसले इतिहासमा अमिट छाप छोड्दछ भनेर बताउँछ।
२०० 2003 मा यसको पहिलो संस्करणदेखि यता पेन अफ द इयरले विलासिता लेख्ने साधन कन्नोइसेसरहरूमा विशेष स्थान जित्यो। वर्षको प्रत्येक पेनले युग, पात्रहरू, र व्यक्तिहरू जसले इतिहासमा अमिट छाप छोड्दछ भनेर बताउँछ।
Graf von Faber-Castell's Pen of the Year 2018 संस्करण रोमी साम्राज्यमा फर्किन्छ जुन आठौं शताब्दी ईसापूर्वदेखि शुरू हुँदै युरोप, अफ्रिका र एशिया हुँदै फैलिएको थियो र आज पनि यो दृश्यहरू देख्न सकिन्छ।
ग्रीकहरूद्वारा लिइएको “देवताहरूको ढु ”्गा” भनेर चिनिने मूर्ति कारारा मार्बलले फकीर आभालाई इरेडिएट गर्छ। लक्जरी संसारमा, सेतो संगमरमर उच्चतम गुणवत्ता मापदण्डहरू पूरा गर्न, भव्यता र प्रतिष्ठा संग जान्छ।
ग्राफ भोन Faber-Castellसन् २०१ 2018 को पेन अफ द इयर २०१er इम्पेरियम रोमानमले यो विशेष संगमरमर राख्दछ, एक पटक विशेषाधिकार सामग्री केवल देवता र सम्राटहरूको चित्रण गर्न प्रयोग गरियो।
प्रत्येक कलम स्टीफनको बहुमूल्य रत्न निर्माताहरूले हातले बनाएको हो। प्लेटिनम-प्लेटेड रिings्गहरू लौरेल मुकुटको साथ कुँदिएका शरीरको संगमरमर खण्डहरू बीच स्थित छन्। रिings्गहरूले प्रसिद्धि र सफलताको प्रतीक गर्दछ र कलमलाई यसको स्पष्ट सुन्दरता प्रदान गर्दछ।
ग्राफ भोन Faber-Castell Imperium रोमानम
संगमरमरको शरीरको विवरण
ग्राफ भोन Faber-Castell द्वारा इम्पेरियम रोमनम
अर्को असाधारण विवरण भनेको क्याप हो, क्लेशियमको साथ कोलिजियमको प्रख्यात आर्केडहरू कोरिएको छ - रोमको अनन्त प्रतीक र यसको अनन्त सुन्दरता - र रोमन सिक्काको लघुचित्र ( डेनारियस, एक प्राचीन र दुर्लभ सिक्का सम्राटको पुतला बोकेको aring। ई.पू.
कोलिजियम टोपी नक्काशीको विवरण
कालो संस्करण यसको विरोधाभासको खेलको साथ आश्चर्यचकित छ। बास्क देशको बिस्काग्लिआ क्षेत्रबाट निकालिएकी मार्क्विनिया ब्ल्याक मार्बलले अत्यन्तै सुन्दरताका साथ कालो पृष्ठभूमिलाई गहन सेतो नसासँग जोड्यो। यसले एन्ट्रासाइट रंगको टाइटेनियम पीवीडी फिनिशको साथ पनि राम्ररी मिश्रण गर्छ, जसले वस्तुको सतहमा साँच्चिकै राम्रो इरिडसेन्स प्रदान गर्दछ।
कालो संस्करण, रोलर
फाउंटेन पेनमा एक हातले समाप्त भएको १ gold-क्यारेटको सुन निब छ, एक रुथेनियम फिनिशको साथ - मर्दाना देखिने कलमको शरीरको साथ एक उत्तम मेल।
ब्ल्याक एडिशनको क्याप पनि कोलिजियमको आर्केडहरू र हातले बनाइएको छ डेनारियस.
एक विशेष सीमित संस्करण।
प्लेटिनम-प्लेटेड संस्करणमा फाउन्टेन पेनले निबलाई १ 18-क्यारेट सुनको दुई र colors्गमा प्रस्तुत गर्दछ र 400०० टुक्रा (रोलरको लागि १२०) मा सीमित संस्करण हो। कालो संस्करणले फाउन्टेन पेन मोडेलको लागि 120० टुक्रा र रोलरको लागि १०० प्रस्ताव गर्दछ।
प्रत्येक टुक्रा गणना गरिएको छ र काउन्ट चार्ल्स भोन फेबर-कासल द्वारा हस्ताक्षर गरिएको प्रामाणिकताको प्रमाणपत्रको साथ एक सुरुचिपूर्ण चमकदार काठको केसमा प्रदान गरिन्छ। CC
ट्यागफेबर-कास्टेल • ओब्जेट्स डीआर्ट • लेखन उपकरण
० मा टिप्पणीइम्पेरियम रोमानम: रोम तपाईंको हातमा"